AMAKAAG: "Anigaa Ayaa Qabtay Shaqada Tababare Looga Baahnaa" - Ku Xigeenkii Liverpool Oo Ku Dooday Inuu Ahaa Midka Klopp Waday - Gool24.Net
AMAKAAG: “Anigaa Ayaa Qabtay Shaqada Tababare Looga Baahnaa” – Ku Xigeenkii Liverpool Oo Ku Dooday Inuu Ahaa Midka Klopp Waday
Tababare ku xigeenkii hore ee kooxda Liverpool ahna ninka tababaraha kooxdaas ee Jurgen Klopp ay mudada dheer soo wada shaqaynayeen ee Zeljko Buvac ayaa si layaab leh u sheegay inuu isagu ahaa tababaraha qarsoon mudadii dheerayd ee ay Klopp wada socdeen.
Jurgen Klopp qudhiisa oo mar ka hadlay xidhiidhka kala dhaxeeya isaga iyo Buvac oo ay asxaab dhaw ahaayeen ayaa ku sifeeyay “Maskax” taas oo caddayn u ah sida uu muhiimka ugu soo ahaa.
Buvac ayaa sanadkii 2018 iskaga tagay Liverpool kaddib markii ay isku dhaceen Klopp walow uusan midkoodna shaaca ka qaadin waxa sababay inay isku dhacaan oo uu bur-buro xidhiidhka wada shaqayn tababarenimo oo 17 sano jiray.
Bixitaanka Buvac ayaa hore su’aalo looga keenay iyadoo la is-weydiinayay qaabka ay Klopp iyo Liverpool u jawaabi doonaan balse Reds ayaa awood ka tagay oo awood kale tagay iyagoo kusoo guuleystay Champions League iyo Premier League.
Haatan 56 sano jirkaas oo agaasime ciyaareed ka ah kooxda Dynamo Moscow ayaa waraysi cusub ka bixiyay arrimaha isaga iyo Klopp taas oo muujinaysa inay wali xiisadi dhexdooda ka taagan tahay.
Buvac ayaa sheegay inuusan ugu hambalyayn Klopp inuu 30 sano kaddib horyaalka ku hoggaamiyay Liverpool balse uu ku faraxsanaa dhammaan xiddigaha kooxda, shaqaalaheeda iyo inta kale oo dhan.
Dhinaca kale Zeljko Buvac ayaa sheegay inuu isagu ahaa tababaraha dadban ee kooxihii ay Klopp kusoo wada shaqeeyeen oo dhan balse uusan kaliya kaamerooyinka hortagi jirin oo uusan waraysiyada iyo wixii lamid ah bixin jirin.
Zeljko ayaa yidhi “Ugu maan hambalyayn (Horyaalka) anigu waxaan u faraxsanaa Liverpool, jamaahiirta iyo ciyaartoyda laakiin ugumaan hambalyayn”
“Waxaan qabtay shaqada tababare marka laga yimaado inaan meel fagaare ah ka hadlo oo aan waraysiyo bixiyo, marka intaas laga yimaado waxaan qabtay dhammaan shaqooyinka waxaanan isku dayay inaan saameeyo kooxahayga intii ugu badnayd ee aan awooday si aan uga caawiyo inay guuleystaan”